NGOs ၃၁ ဖွဲ့၏ မြန်မာ လ.၀.က ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုသည်ကို တုန့်ပြန်ချက်။ | Rakhaine Mray
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုကျော်ကျော် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအနေဖြင့် လူနည်းစု ပြဿနာကို အလေးအနက်ထားရှိပါသည်။ ပထမဆုံး ပြောလိုသည်မှာ မကြာခင်က ဖြစ် ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်အရေး အခင်းကိစ္စသည် ၂ ဦး ၂ ဖက်မှ ရာဇ၀တ်မှု့ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်သာဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေးအပေါ်မှာ အခြေမခံပါ။ ဥပဒေမဲ့မှု့၊ လာဒ်စားမှု့တို့ကို ကျင့်သုံးခဲ့ သည့် နှစ်ပေါင်း များစွာ အုပ်ချုပ်လာသည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်မှာသာ တာဝန်ရှိပါသည်။
(၃၁) ဖွဲ့သော နိုင်ငံခြား NGOs အုပ်စုအတွက် မေးခွန်းကတော့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နေရာယူထားသည့် စစ်တပ်နှင့် ၄င်း၏မိတ်ဆွေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက NGOs များ၏ အဆိုပြုချက်ကို နားထောင်လက်ခံ ပါ့မလား?? နားထောင်မှာ မဟုတ်သာသေချာသည်။ အဲ့ဒါကိုလည်း NGOs အသိ ပင်။ ဒီ (၃၁) ဖွဲ့သော NGO အုပ်စုက လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည့် အတိုက် အခံ ပြည် သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တွန်းအားပေးနိုင်မည်လို့ယူဆလျှင် ဒီ NGOs တွေမှာ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာကို ထောက်ပြချင်ပါတယ်။
အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်စွာဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံဖြစ်နေပြီဆိုကြပါစို့ မြန်မာနိုင် ငံထဲမှာရှိတဲ့ ဥပဒေပြုသူများသည် ၄င်းတို့ မဲဆန္ဒရှင်များ၏စကားကို နားထောင်ရမည်လော သို့မ ဟုတ် တိုင်းတပါးက NGOs အုပ်စု၏စကားကို နားထောင်ရမည်လော ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားရန်ရှိ သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ သူရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်အရ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒ ကို ပြည်သူလူထုကိုယ်စား အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ရှိသူများသည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်ကို NGOs များအနေဖြင့် သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နောက်တချက်ကတော့ ပါလီမာန် အနေဖြင့် လ.၀.က ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကိစ္စကို ဆွေးနွေးမည် မဆွေးနွေးမည်ကို မ သိရသေးဘဲ ဒီဥပဒေဟာ ဘာတွေထည့်ဆွေးနွေးမည်ဆို တာကို အကြံပေးတာ ပညာရှိမဆန်ပါ။
လက်တွေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေသည် မည်သည့်လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု ဤအ ခွင့်အရေးများကိုမှ အာမ မခံပါ။
အကယ်၍ ဤ NGOs များအနေဖြင့် သူတပါးတိုင်းပြည်များ၏ ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် စွက်ဖက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆပါက၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်သော တိုင်းပြည် အသီး သီးတွင် ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးပါသလည်း။ မိမိကိုယ် မိမိ မေးခွန်း ထုတ်ရန်ရှိသည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်အတိုင်း လ.၀.က ဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အစိုးရနိုင်ငံများမှ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိ ညာဉ်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအင်အားကြီး နိုင်ငံများသည် R2P (Responsible2Protect)ဟု ခေါ်သော စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းခွင့် ဥပဒေကို အသုံးချပြီး Libya နိုင်ငံကို ကျူးကြော်သိမ်း ပိုက်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ Syria နိုင်ငံ၏ ပြဿနာတွင် ဤဥပဒေ အကြောင်းကို ထည့်တွင်း စဉ်း စားခြင်းမရှိပါ။
အကယ်၍ ဥပဒေ တစ်ရပ်သည် နိုင်ငံတကားအဆင့်ဖြင့် သက်ရောက်ရှိရမည်ဟု ယူဆပါက ဤ NGOs များအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂကို မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါသည်။ ထုတ်ကော ထုတ်ဖူးပါသလား??
ဤနေရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောလိုသည့်အချက်မှာ ကမ္ဘာမှာ ပြီးပြည့်စုံသည့် ဥပဒေမရှိပါ။ သို့သော် လည်း ဥပဒေတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရမည် သာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ဥပမာ တစ်ခုကတော့ ကမ္ဘာ့အင်းအားအကြီးဆုံး၊ ဒီမိုကရေစီ အထွန်းကားဆုံး အမေရီ ကန်နိုင် ငံမှ ယနေ့ထုတ်ပြန်ထားသော အမျိုးသားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ (NDAA, National Defense Authorization Acts) နှင့် တိုင်းတပါးသား မွတ်စလင်များကို ဥပဒေမဲ့ ဖမ်း ဆီးချုပ်နှောင်ထားသော Guatanamo အကျဉ်းထောင် ကိစ္စတို့ဖြစ်ပြီး။
အမျိုးသားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေသည် အမေရီကန်နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့အစည်း အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး၊ Guatanamo အကျဉ်းထောင်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက် ရာရောက်သည်ကို ဤ NGOs များအနေဖြင့် သိပါသလား။ သိသည်ဆိုပါက NGOs များအနေဖြင့် ဥပဒေမူကြမ်းများ အကြံပြုချက်များ အမေရီကန်အစိုးရကို ပေးပို့ခဲ့ဖူးပါသလား။
အမေရီကန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားထက် တိုင်းတပါး NGOs များ၏ အကြံဥာဏ်ကို လက်ခံလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မယူဆပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဆန္ဒကို မလေ့လာပဲ ဤ NGOs များ အနေဖြင့် မိမိတို့ ထင်ရာ မြင်ရာများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ အခြေအနေကို မလေ့လာဘဲ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေပါက မိမိတို့၏၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်မှုများသည် အလဟဿ ဖြစ်နေမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သတိပေးလိုက်သည်။
(Ohn Mar Oo ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
← ရခိုင်ပဋိပက္ခြဖစ်စဉ်အေပါ် လူ့အခွင့်အေရးကော်မရှင်နှင့် မေးမြန်းချက်
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို မြန်မာတွေသွားရောက် ရှင်းလင်း →